Dhimma Araaraa: Dhibdeen siyaasaa OPDO fi ABO gidduu hin jiru – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooDhimma Araaraa: Dhibdeen siyaasaa OPDO fi ABO gidduu hin jiru
Dhimma Araaraa: Dhibdeen siyaasaa OPDO fi ABO gidduu hin jiru
Via Lammii Beenya, Adoolessa 25, 2018
Dhibdeen siyaasaa OPDO fi ABO gidduu hin jiru, hin jiraatus. Dhibdeen siyaasaa ABO fi sirna Itoopphiyaa gidduu jira. Sirni Itoophiyaa sirna humnaan Oromoorratti fe’amedha. Sirna cunqursaati. Sirna gabrummaa ti. Sirna Afaan qawween mirga namaa sarbee nama dhiitudha. Sirna saamichaa fi ajjeechaa babal’isudha. ABOn ammoo jaarmiyaa cunqursaan dhalchitedha. Hariiroon ABO fi sirna Itoophiyaa jidduu jiru hariiroo falammii ti. ABOn sirna kanaan falme. ABOn sirni kun diigamu yookaan jijjiiramu malee jijjiiramni waaraa hin argamu jedhee amanaa ture. Kanaaf ijoolleen Oromoo ABO jala hiriirtee kabaja mirga Oromoof wareegama ulfaataa baaste. Lubbuun kitimaa itti taate. Dhiiga ishee qulqulluu itti dhangalaaste. Waan qabdu mara kabajama mirga Oromoof gumaachite. Walfalmii afaan qawween gaggeeffamaa ture keessatti sirni Itoophiyaa fi ABOn akka malee wal madeessaniiru. Sirni Itoophiyaa bitta babal’isuuf, ABOn ammoo cunqursaa cabsuuf. Falammii akkanaa kana hundeen furanii gaaffii ummataaf deebisa saffisaa kennuun bilchina gaafata.
Dhimmi egeree Oromoo dhimma jaarmiyaa olitti ilaalamuu qaba. Gabaabsinee yaaduu hinqabnu. Dubbiin irra dibaa fi shira of keessaa qabu gatii dabalataa Oromoo kaffalchiisuu hinqabu. Araarri ABO fi Sirna Itoophiyaa gidduutti buufamu kan dhibdeen Oromoo hundeen itti furamu ta’uu danda’uuti qaba. Har’a OPDO keessaa ijoolleen Oromoo mataa ol qabattee aangoo qabachuu eegaluun tarkaanfii tokkodha. Aangoon ijoollee keenyaa kun garuu dhibdee siyaasaa Oromoo fi Sirna Itoophiyaa gidduu jiru hundeen furuuf karaa saaquu qaba. Kanaafis deemsi eegalame nama abdachiisa. Muummichi Ministeeraa Abiyyii Ahmad Pirezedaantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin hooggana ABO Daawud Ibsaa dubbisuun nagaan dhibdeen siyaasaa ABO fi sirna Itoophiyaa jidduu ture akka furamuuf itti deemuun gama lamaaniin iyyuu murannoo fi fedhiin jiraachuu akeeka. Biqiltuu nagayaa kun ni coolligdi jedhee hin yaadu.
Garuu deemsi nagaan dhibdee siyaasaa ABO fi sirna Itoophiyaa jidduu jiru akka gufatuuf hirriba dhaban inuma jiraatu. Keessumaa Habashoonni fi Tigiroonni akkasumas kanneen Oromiyaa qorquu baran humna qabaniin dura dhaabbachuu malu. Oromoon dhimma kana hubatuu qaba. Olola rakasa bu’aa hin qabne walirratti oofuu osoo hintaane wareegamni barbaachisaan kaffalamee haala itti Oromoo fi Oromiyaa ceesisuun danda’amurratti xiyyeeffachuun hojjechuun egeree Oromiyaaf bu’aa qaba.
Akkan argutti ABOn qaama sadaffaa gaafachuun ijoollee Oromoo kanarraa shakkii qabaatee miti. Utuu wal shakkanii hammatanii wal dubbisanii nagaan waliin hin haasa’an. Garuu sirna sanarraa shakkii guddaa qabu jedheen amana. Kunimmoo waanuma malu. Sirna waggaa 40 waraante tokko harka bal’istee itti of kennuun gowwummaa ta’a. Gaaffiin bu’uuraa akkamiin furama? Dhibdeen siyaasaa Oromoo fi sirna Itoophiyaa gidduu ture akkamiin xumura godhata? Itoophiyaa fuulduraa keessatti qoodni Oromoo maal fakkaata? Nageenyaa, bilisummaa fi badhaadhina ummata keenyaa akkamiin eegsifna? Dogoggorri kana duraa akka hin dabalamneef maal goona? Gaaffii walxaxaan wareegama guddaan itti kaffalame sirnaan gadi taa’amee sakatta’amee tokko tokkoon deebisa itti kennamee waliigalteerra gahamuu qaba. Kun kabajaa Oromoo madaala. Kun ulfina Oromoo ol kaasa. Kun wareegama ijoollee Oromoo jijjiirama kana fiduuf kitimaa taateef injifannoodha. Ummanni keenya sirna sanaan dararame, ijoollee isaas marartee malee qabsootti bobbaase, gaafa ijoolleen isaa wareegamtus gadduu didee qabsoo itti fufe, maatiin carraa ijoollee isaanii awwaallachuu dhabanii injifannoo Oromoo qofa eegan kabajamuu qabu.
Kanaaf hundumti keenyayyuu dhibdeen ABO fi sirna Itoophiyaa jidduu jiru kabaja ummata keenyaa eegee xumuramuu qaba. Kana argamsiisuuf hundumti keenya obsaa fi murannoon irratti hojjechuu feesisa. Qaama faayidaa yeroo qofa eegsifachuuf adeemsa kanatti gufuu ta’uu barbaadus dura dhaabbachuu qabna.
Ajjeechaa aadde Biraanee Maammoorratti walqabatee namni hidhame hin jiru